Waa kuwan Podcasts-ka ay Suuqgeynta jecel ee Bulshadeennu | Martech Zone
Haddii aadan dhegeysan podcodka, waxaan kugu dhiiri gelin lahaa. Soo Degso Stitcher ama isticmaal qalabkaaga gacanta ama isticmaal barxadda kumbuyuutarka ee kumbuyuutarkaaga. iTunes or Google Play waxay kuu ogolaaneysaa inaad raadiso oo aad uqorto iyaga sidoo kale.
Xalay, waxaan wadahadal aad u wanaagsan la yeelanay hogaamiye maxalli ah oo u tababbaranayey maratoonkiisii ​​ugu horreeyay ee yar-yar oo ah 58 sano jir. Wuxuu yiri, tababarka, mid ka mid ah waxyaabihii ugu fiicnaa ee uu abid sameeyo wuxuu ahaa in la waafajiyo Podcasts. Wuxuu isku dayay muusig, laakiin wali ma uusan helin diiradiisa iyo feejignaantiisa socodsiinta sida podcasting ay sameysay. Wuu ku lumi karaa fekerka inta uu ku jiro podcast-ka, isaga oo awood u siinaya inuu sii fogaado oo inbadan nasto.
Toddobaad ka hor, ayaan wareysannay Chris Spangle - wareysi aan dhawaan daabici doonno. Chris waa mid ka mid ah horjoogayaasha ugu horreeya ee socodsiiya mid ka mid ah barnaamijyada siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka. Wuxuu sidoo kale maareeyaha dhijitaalka u ahaa mid ka mid ah barnaamijyada raadiyaha ugu waaweyn dalka dhowr sano. Chris wuu ogyahay maqalka, wuuna fahmayaa sixir ee Podcasting sida qofna weligay lama kulmin.
Inkasta oo dadka badankood u maleynayaan inay jiraan kala sareyn xagga warbaahinta ah - laga bilaabo qoraalka, illaa maqalka, illaa fiidiyaha - dhab ahaan sidaas maahan. Adiga oo kaliya dhageysiga iyo dhageysiga wada hadalka, dhagaystayaasha Podcast waxay awoodaan inay diirada saaraan wada hadalka si aad uga wanaagsan wixii kale ee dhexdhexaad ah. Waa mid aad u awood badan oo awood u leh inay soo jiidato dareenka waana inaan la dhayalsan ganacsiyada.
Waxaan aaminsanahay iskuduwaha wax badan oo aan dhisnay kuweena istuudiye casri ah oo casri ah oo ku yaal bartamaha magaalada Indianapolis. Si aan kuugu bilaabo, waxaan weydiinay kuweenna Martech Zone Community muxuu ahaa barnaamijyadooda ay jecel yihiin inay kuu bilaabaan. Ama hadaad mar horeba dhageysaneysay, si aad uhesho qaar cusub!
Gawaarida Jaban - Xayeysiiska Facebook & khubarada warfaafinta ee lacagta la siinayo Keith Krance, Ralph Burns (Dominate Web Media), iyo Molly Pittman (DigitalMarketer) waxay wadaagaan jarista xayeysiinta Facebook, Xayeysiiska Youtube, Google Adwords, Tilmaamaha xayeysiinta ee Twitter & Instagram, istaraatiijiyadaha iyo daraasadaha kiisaska sida loo koro ganacsigaaga ama astaantaada adoo adeegsanaya xayeysiinta internetka.
Jiis badan, Jeedis yar - Dhegeyso toddobaad kasta sida Dean Jackson u caawiyo milkiileyaasha ganacsiyada iyo ganacsatada sida aad adigu ugu adeegsato 8-Kuwa Hawl-yaqaannada Macaash-doonka ah meheraddooda. Bogagga huruudka ah ayaa ku dul wareegaya steroids!
Sargaal & qulquli - wuxuu soo bandhigayaa sheekooyinka wararka muhiimka ah iyo dhacdooyinka goobta, iyo sidoo kale wareysiyo lala yeelanayo xirfadleyda ugu sareysa, istiraatiijiyadda iyo saameynaha oo gacan ka geysanaya qaabeynta aragtida iibka iyo tikniyoolajiyadda suuq geynta berri.
Maskaxda Maskaxda - Roger Dooley wuxuu la wadaagayaa tabaha maskaxda-u janjeedha, oo ay weheliso khibradda martidiisa, si loo kordhiyo qancinta la-talinta la taaban karo, ee ku saabsan cilmi-baarista neuromarketing.
Duuji Wareejinta - Podcast toddobaadle ah oo ay kuu keeneen kooxda Uberflip, Flip the Switch wuxuu leeyahay qodobo wada hadal iftiiminaya oo leh maskaxda suuq geyn. Qeybo cusub ayaa la sii daayaa Talaad kasta.
Wehelka Suuqgeynta - Wehelka Suuqgeyntu had iyo jeer waa mid xiiso leh, had iyo jeer xiiso leh, oo had iyo jeer bartilmaameed leh aragtiyo iyo fikrado u rogi kara caqligaaga suuqgeynta "11."
VB Wadahadal - VB Engage, tiknoolajiyada naxariis darrada ah ee suuq geynta tikniyoolajiyadda ee ka socota shirkadda VentureBeat oo ay si wada jir ah u martigelinayaan Stewart Rogers iyo Travis Wright.
Faa'iidooyinka Bulshada - Dhageyso aragti dhab ah oo ku saabsan dadka dhabta ah ee shaqada dhabta ah ka wada warbaahinta bulshada. Waxaad kaheleysaa sheekooyinka gudaha iyo siraha daaha gadaashiisa ku saabsan sida shirkadaha sida Ford, Dell, IBM, ESPN iyo daraasiin shaqaale kale ah, u shaqeeyaan una cabbiraan barnaamijyadooda warbaahinta bulshada.
Qalbiga Suuqgeynta - Ka hel fikrado suuq-geyn ah kobcinta meheraddaada dhex-dhexaadka ah adiga oo xiriir dhab ah ka samaynaya macaamiishaada.
Shaqaalaha Ecommerce - Ecommerce Crew waa Mike Jackness iyo Grant Chen, milkiilayaasha dukaamada leh labaatan sano oo khibrad isku dhafan ah oo ku saabsan ganacsiyada internetka ee guuleysta.
ECommerceFuel Podcast - On eCommerceFuel podcast waxaan diiradda saareynaa talooyinka, istaraatiijiyadaha iyo sheekooyinka si looga caawiyo lix iyo toddobo milkiileyaasha dukaamada tirada leh in ay ganacsigooda u wareejiyaan heerka ku xiga.
Saameynta Ecommerce - Saameynta Ecommerce waa Podcast loogu talagalay milkiilaha ganacsiga ecommerce iyo fulinta suuq geynta internetka. Waxaan leenahay wadahadal run ah oo lala yeesho sayidleyda suuq geynta iyo sumeynta, waxaanan siineynaa tababaro iyo istaraatiijiyooyin taas oo kaa caawinaysa inaad u badasho macaamiishaada macaamiisha bixinta.
Dhis Bakhaarkayga Online-ka ah - Khabiir ku takhasusay suuq geynta eCommerce oo aad horeyba ugu kalsoon tahay inuu kaa caawiyo ka shaqeynta meheraddaada.
Kulaylaha MBA - oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee ganacsatada madaxbannaan ee adduunka oo dhan.
Suuqan Duugga ah - In kasta oo dadka badankood u maleynayaan in suuqgeynta waxyaabaha ku jira ay cusub tahay, sheekooyinka oo loo sheego si loo soo jiito loona sii haysto macaamiisha waa, laga yaabee, inay tahay tan ugu da'da weyn cilmiga suuqgeynta. Suuq-geyntaan duugga ah ayaa noogu mahadcelinaya xaqiiqdaas.
Suuqgeynta Buugga Suuqgeynta - Wareysiyo toddobaadle ah oo lala yeesho qorayaasha ugu iibinta wanaagsan si ay kaaga caawiyaan inaad la socoto waxa ka shaqeynaya qaybta isbeddelaysa ee suuqgeynta casriga ah (iyo iibka).
Suuqgeyaasha Casriga ah Podcast - LinkedIn's Jason Miller wuxuu la fadhiyaa qaar ka mid ah laydhadhka ugu ifaya suuq geynta si uu ugala hadlo isbeddelada suuqgeynta B2B, hababka ugu fiican, oo fiiri haddii ay leeyihiin sheekooyin shakhsiyadeed oo xishood leh oo ay diyaar u yihiin inay la wadaagaan.
Smarts Suuq - Toddobaadkan Podcast-ka waxaa ku jira wareysiyo qoto-dheer oo lala yeelanayo suuqgeeyayaal caqli badan oo ka kala socda dhammaan qeybaha nolosha. Waxaa marti galiyay MarketingProfs, daqiiqadan 30-daqiiqo, Podcast-ka todobaadlaha ah wuxuu soo gudbiyaa aragtiyo ficil ah iyo talooyin dhab ah oo kaa caawinaya inaad suuq yeelato caqli badan.
BeanCast - Wadahadalka joogtada ah ee toddobaadlaha ah ee ku saabsan isbeddellada saameeya sumaddaada. Ma dhageysaneysaa
Alaab Dijitaal ah - BMC 'Digital Outliers' waxay soo bandhigtay wada sheekeysi lala yeelanayo qaar ka mid ah maskaxdeena warshadeed ee ugu ifaya markay baaraan siyaabaha badan ee tiknoolajiyada dijitaalka ahi u beddeleyso goobta shaqada ee casriga ah.
Raadiyaha Suuq-geynta Dijital ah - David Bain wuxuu wareysi la yeelanayaa khabiir ku xeel dheer suuqgeynta khadka tooska ah ee maadada takhasuska u leh - iyo sidoo kale inuu helo fikradooda ku saabsan xaaladda ganacsiga internetka maanta.
Suuqgeynta Kafee - Ka-suuq-geynta Kafee-ka waa mid maqal ah oo ku saabsan dalabka daboolaya suuq-geynta caadiga ah iyo kan cusub. Kooxda martida kuu ah, John J. Wall iyo Christopher S. Penn, waxay duubtaan bandhigga dukaan kafeega maxalliga ah toddobaad kasta waxayna daabacaan bandhiga subaxnimada Khamiista.
Iskuulka Suuqgeynta - Iskuulka Suuqgeyntu waxay kuu keeneysaa 10 daqiiqo oo talo bixin suuq geyn ah maalin walba.Hel tilmaamaha saxda ah si aad ganacsigaaga ugu gaarsiiso heerka xiga.
Liiskani kuma jiro nidaam gaar ah, oo aan runtii jeclahay. Waxaa jira qaar caan ah suuqgeynta suuqgeynta iyo kuwa aanan waligay maqlin taas waan hubin doonaa. Liiskan oo kale, waxaan kugu dhiiri gelin lahaa inaad tijaabiso oo aad dhagaysto hal ama laba qaybood si aad u aragto haddii aad jeceshahay boodhadhka oo aad rabto wax intaa ka badan. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa inaad ku biiri doontid kuweena Wareysiyada Martech Podcast!
Waan hubaa inaad heleysid dhowr jawharad oo aad dhegeysan doontid!
Tags: digirta digirtafekerka maskaxdadhisto dukaankeyga internetkaraadiyaha dhijitaalka ahqalabka dijitaalka ahshaqaalaha ecomshaqaalaha ecommerceshidaalka ecommercerog badhankaPodcast buugga suuqgeyntawehelka suuq geyntasuuqgeynta kafeegaSuuqgeynta Suuqgeyntadugsiga suuq geyntasuuq-geynta suuq-geyntahalgankafarmaajo badan dhimayaashataraafikada weligeed ahPodcastsfaa'iidooyinka bulshadasuuq galiyayaal casri ahxidhmooyin iyo socodwadnaha suuqgeyntasuuqan duugga ahkulaylaha mbavb ku hawlan
Waxyaabaha Cusub ee Cusub (@TNNTnews)
Apr 26, 2017 at 9: 19 AM
Dhammaan qoraalada waaweyn !! Waad ku mahadsan tahay liiska!